GMM oo si adag kaga hadlay amar uu soo saaray Cumar Finish | KEYDMEDIA ONLINE
GMM oo si adag kaga hadlay amar uu soo saaray Cumar Finish
Mucaaradka, ayaa si kulul kaga hadlay go’aan dhawaan ka soo baxay duqa Muqdisho Cumar Finish, waxayna baaq adag u direen Xukuumadda Xil-gaarsiinta.
MUQDISHO, Soomaaliya – Golaha Midowga Musharraxiinta, ayaa si adag u canbaareeyay go’aankii 11 January 2022, ka soo baxay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, kaas oo fal-danbiyeed ku tilmaamay bannaan-bax uu “Golaha Bulshada Banaadir” iclaamiyay in dadka ku dhaqan caasimadda isugu soo baxaan 13/1/2022 oo maanta ku beegan.
“Goluhu wuxuu cambaaraynaa hadalkii ka soo yeeray Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ee fal danbiyeed ku tilmaamay mudaaharaadka, oo ah xaq dastuuri ah, sida uu dhigayo qodobka 20-aad ee dastuurka dalka”, ayaa lagu yiri war ka soo baxay Mucaaradka.
Waxa ay xuseen in isku-soo-buxu yahay xaq dastuuri ah, shacabka Gobolka Banaadirna ay xilli kasta mudaaharaadi karaan, waxayna Golaha Bulshada Banaadir (GBB) uga mahadceliyeen aqbalka codsigii kaga yimid Odayaasha Dhaqanka Muqdisho iyo Murashaxiinta ee ahaa in dib loo dhigo mudaaharaadka.
Xukuumadda Xil-gaarsiinta ayay sidoo kale, kaga mahadceliyeen in ay gudatay waajibkii kaga aaddanaa muddaaharaadka, maadaamada uu Wasiirka Amniga Cabdullahi Maxamed Nuur, ku amray laamaha amniga ee muhiimka ah in ay ilaaliyaan ammaanka mudaharaadayaasha.
Waa ay Xukuumadda uu Rooble, hoggaamiyo ugu baaqeen in ay sii waddo ka shaqeynta ilaalinta xuquuqda mu’adinka, xilna iska saarto furitaanka saaxadda siyaasadda oo ay ugu horrayso “xoriyadda mudaaharaadka, kulammada, ololaha, safarka iyo in warbaahinta qaranka oo loo oggolaado Musharrixiinta”.
Bannaan-baxa maanta baaqday ee uu soo qaban qabiyay “Golaha Bulshada Banaadir” ayaa la rumeysan yahay in ay geed-fadhi u ahaayeen xubno ka tirsan Midowga Musharixiinta, gaar ahaa, hoggaamiyayasha Xisbiyada UPD iyo Wadajir.
Odayaal dhaqan iyo siyaasiyiin ka soo jeedda gobolka, ayaa dadaal xooggan ku bixiyay in dib loo dhigo bannaan-baxa, taas qabanqaabiyayaashu aqbaleen, sida uu sheegay Gudoomiyaha GBB, Cismaan Maxamuud Cadaawe.